Infinix dia manambara Hot 9 sy Hot 9 Pro: eo anelanelan'ny elanelam-potoana miaraka amin'ny Helio P22 sy bateria lehibe | Androidsis
Infinix dia nanambara telefaona vaovao roa taorian'ny nanolorany ny telefaona Note 7 sy Note 7 Pro tamin'ny volana aprily. Manome eo anelanelan'ny elanelan-tany roa miaraka amina tontonana lehibe ny mpanamboatra izay manome fahombiazana tsara amin'ireo terminal amin'ny fiaingany any India manomboka amin'ny 5 Jona.
Infinix Hot 9 sy Infinix Hot 9 Pro Miorina amin'ny fototra tsara izy ireo, nitandrina tsara ny endrika ary mampiseho ny lokony manaitra amin'ny manga sy volomparasy turquoise. Ny orinasa monina any Hong Kong dia handefa azy ireo voalohany amin'ny tsena indiana ary avy eo any amin'ny faritany hafa.
1 Toy izany koa ny Hot 9 sy Hot 9 Pro vaovao
Toy izany koa ny Hot 9 sy Hot 9 Pro vaovao
El Infinix Hot 9 mitovy aminy Infinix Hot 9 Pro dia manana efijery 6,6-inch miaraka amin'ny famaha HD +, tahan'ny lafiny 20: 9 ary lavaka voatsatoka amin'ny zoro havia ambony ho an'ny fakantsary selfie 8MP. Efa ao ambadika dia mampiditra scanner capacitive ho mpamaky ny rantsan-tànana.
Izy roa koa dia mampiditra processeur iray ihany, ny Helio P22 avy amin'ny MediaTek, 4 GB RAM ary fitehirizana 64 GB miaraka amin'ny mety hanitarana azy amin'ny MicroSD. Ny bateria dia 5.000 mAh miaraka amina fiampangana 10W ary ny rindrambaiko dia Android 10 miaraka amin'ny sosona XOS 6.0 ho an'ny fampiharana orinasa marobe.
Ny tsy fitovizan'ireto finday finday ireto dia ao amin'ny sensor lehibe aorina, ny Hot 9 dia manana solomaso 13 megapixel, raha ny Hot 9 Pro kosa manana sensor 48 megapixel. Ireo telo izay miaraka amin'izy ireo dia mitovy: sensor MP 2 makro, sensor ho an'ny MP 2 ary sensor ho an'ny jiro ambany.
El Infinix Hot 9 tonga amin'ny INR8,499 (100 euro eo ho eo no hanovana) ary ny Infinix Hot 9 Pro Mivoaka amin'ny INR9,499 (112 euro). Tonga izy roa nanomboka ny 5 jona tao anaty loko roa, manga sy volomparasy misy headphone tafiditra ao anaty boaty, charger ary fiarovana ny tontonana IPS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Infinix dia manambara Hot 9 sy Hot 9 Pro: eo anelanelan'ny elanelam-potoana misy an'i Helio P22 sy bateria lehibe